ဘုရင့်နောင် သတ္တိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘုရင့်နောင် သတ္တိ
Posted by နွေဦး on Nov 15, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. |7comments
ကျုပ်တို့သမိုင်းမှာ သူရဲကောင်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဘုရင့်နောင်ရဲ့သတ္တိကိုတော့ မြန်မာတွေ အသိပါဘဲ ။
သူ့ခေတ်သူ့အခါ သူသည်လည်း ဘုရင့်နောင်ပါ
ဒီခေတ်မှာတော့ ငါသည်လည်း ဘုရင့်နောင်ပါဘဲ..။
စေတနာ စေတနာ အခါခါပြောပြီး
ယိုင်နဲ့နဲ့ တံတားတစင်း ငါဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ ။
ရာဇဝင်မှာ ထွန်းပြောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင့်နောင်လို
ငါလည်း နှစ်တရာလောက် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါရဲ့ ။
ယိုင်တိုင် ယိုင်တိုင်…” ဖြစ်နေရပါပြီ ။
ခရိုနီ အကြီးစားတွေရဲ့ လက်ချက်ကို
သွယ်ဝိုက်ပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ခံရပြန်ပြီလေ ။
တကယ်ဆို သူတို့ အသာကြီးဘဲ
ကျုပ် ဘုရင့်နောင် ကြီးပါဗျာ..။
အဲဒီဘက်က မသွားနဲ့ ဒုက္ခနဲ့ လှလှတွေ့ကြမယ်ဆိုပြီး
နာမယ်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေခဲ့တာကြာပါပေါ့လား ။
သူတို့ ဂုတ်သွေးစုတ်ရာ လှိုင်သာယာကို
ကျုပ်ပေါ်ကဘဲ ကျော်ခွလို့သွားကြလေရဲ့ ။
နိစ္စဓူဝ မြင်ကြားသမျှ ဘဝတွေအကြောင်းက
ပြောပြလို့ မဆုံးနိူင်ပါဘူး ။
သူတို့တွေ သွားသွားလာလာ အဆင်ပြေစေဖို့
အရှေ့ဖက်မှာ ဂုံးကျော် တံတားတစင်းထိုးမလို့တဲ့ ။
ပြောစကတော့ လေးလနဲ့ အပြီးဆိုဘဲ
ဒီစကားကြားတော့ ကျုပ်လည်း “ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုပါ၏” ပေါ့ ။
ခုချိန်ထိကြိုးစားပမ်းစား မနားမနေ လုပ်ကြပေမဲ့….ဟဲဟဲ..
ကျုပ်ကတော့ ဒီဂုံးကျော် တံတားကြီး ဖွင့်ပွဲကို
နေ့စဉ်နေ့စဉ် မလှုပ်တလှုပ် တရွေ့ရွေ့နဲ့
နဂိုကထည်းက ယိုင်နဲ့နဲ့ နေခဲ့ရတဲ့
သူရဲကောင်း ဘုရင့်နောင်လို သတ္တိနဲ့
နွေဦး က ကဗျာရေးလည်းကောင်းသကိုးဗျ…
သတ္တိဆိုတော့.. တပင်ရွှေထီး.. သူရဲကောင်းရွေးတော့.. လက်ထိပ်အပ်စိုက်တာမှာတွန့်သွားလို့.. သတ္တိမရှိဘူးမထင်ရအောင်… ကိုယ့်ဗိုက်ကိုယ်ခွဲ.. အူနဲ့တိုင်ပတ်ပြတဲ့.. မိုက်ရူးရဲတယောက်ရဲ့.. သတ္တိများ.. ရေးမလားလို့…။
အတွေးလေးကိုရော ၊ ရေးထားတာ ထိထိမိမိရှိလှတဲ့ ကဗျာလေးကိုပါ သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ် ။
ကွက်တိကို မှန်နေတာပါပဲ … သူတို့ အကျိုးတွက် ထပ်ဆောက်တဲ့ ဂုံးကျော်တံတားတွေကြောင့် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ချိန်နောက်ကျရတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှပါပဲ ။
ဘုရင့်နောင်ကုန်းကျော်တံတားကတော့ ရုပ်လုံးမကြွသေးလို့ ဘယ်နေရာနဲ့ ဘယ်လိုဖြတ်ထိုးမလဲ မှန်းမရသေးပေမယ့် ၊ ပထမဆုံး လမ်းချဲ့ တာနဲ့တင်ပဲ ၊ ရုံးဆင်း၊ရုံးတက်ချိန်တွေ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒါပေသိ … ဒီခေတ်ဒီစနစ်မှာ ဒီလူဖြစ်လာရတော့ အားမတန်၊မာန်လျော့လို့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ စောင်ရရုံပေါ့လေ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တင်္နလာနေ့ကဆိုလျှင် .. လှိုင်သာယာ ဇုံ၂ကနေ ၊ ပန်းဆိုးတန်းကို ပြန်တာ …. ညနေခြောက်နာရီလေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ထွက်တယ် ၊ ညဆယ်နာရီ ခွဲကျော် ဆယ့်တစ်နီးပါးမှရောက်တယ် ။ အဲ့လောက်ထိကိုကားကျပ်သွားတယ် ။ ဂုံးကျော်တံတားဆောက်လို့ ကားပိတ်မယ်ဆိုလျှင် ကားတွေကို စနစ်တကျ သူ့လမ်းနဲ့သူမောင်းဖြစ်အောင် ၊ ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုပါတယ် ၊ မီးပွိုင်မှာပဲ အသေကြီးလို ရပ်နေတော့ ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်က ကားတွေ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ရှေ့တိုးမရ နောက်ဆုတ်မရနဲ့ပေါ့ ။ ခေတ်စနစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ၊ ဦးနှောက်မရှိလျှင် ဘယ်နေရာမှ အံမ၀င်ဘူး ။
ပြည်လမ်းပေါ်ထိုးမယ့် ကုန်းကျော်တံတားကိုပဲကြည့် ၊ တကယ်ယာဉ်ကြောအသွားများတာ (လိုင်းကားကိုပြောတာ) အင်းစိန်လမ်းပေါ်မှာ ၊ ဒါကို ထိုးတော့ ပြည်လမ်းပေါ်ထိုးတယ် ။ နဂိုကတည်းကမှ မီးပွိုင့်က ကောင်တာ တွက်ပုံတောင် ပြည်လမ်းဘက်နဲ့ အင်းစိန်လမ်း ၊ လှည်းတန်း ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဘက် မတူတာ အခုလို ဆောက်ပြန်တော့လည်း ……. ဖွီးး ချဉ်လိုက်ထှာ မီးပွိုင့်မစောင့်နိုင်ရအောင် ဘယ်ကမ္ဘာထိသွား – – မလို့လဲ မသိဘူး ။